Mune slurry pombi iyo impeller uye mukati meiyo casing inogara ichionekwa kune slurry uye inofanirwa kuchengetedzwa zvinoenderana nekupfeka. "Kusarudzwa kwemidziyo yekumisikidza uye casing kwakakosha sekusarudzwa kwepombi pachayo!" Kune matatu matatu akasiyana mamiriro anogadzira kupfeka mune slu ...
Impeller irori, inotenderera chikamu chepombi centrifugal. Kumberi nekumashure machira ane pombi kunze kwema vanes ayo anoderedza kudzokorodza uye chisimbiso kusvibiswa. Yakaomeswa simbi uye yakaumbwa elastomer impellers anonyatso kuchinjika. Kanda mumidziyo inopinza haidi kuiswa kana nzungu. Yakakwira efficienc ...
Kana uchipomba hasha slurries hausi iwo mubvunzo wekuti iwe uchazoda slurry pombi spares uye kupfeka zvikamu - iwo mubvunzo wekuti riini. Nesisitimu dzakazara dzakabatana uye sosi imwechete yekupa mhinduro isu tinorerutsa kuverenga, kugovera uye kumisikidza kweslurry pombi zvikamu uye zvipenga kuchengetedza yedu ...